1 သင်ဘတ်ဂျက်ရှိပါက XNUMX ကိုနှိပ်ပါ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 22, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဘ ၀ ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ် ဖို အပေါ်။ ဘလော့ဂါသည် Scoble အားသူ၏အဖြစ်အပျက်သို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး Scoble ကခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ကုန်ကျငွေများကိုပေးဆောင်ရန်တောင်းခံချိန်တွင်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ Scoble သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကောင်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးကြီးမားသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခုအပတ်သည်ခက်ခဲသော (သို့သော်အလွန်ပျော်စရာ) ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်စာအုပ်အတွက်အခန်းများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်စီမံကိန်း ၂ ခုပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ Plaxo …စသည်တို့ဖြင့်အပတ်တိုင်းလူများစွာကိုထိတွေ့သည်။ စသည်ဖြင့်ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်မတုံ့ပြန်သောစာဖတ်သူများနှင့်အရေးတကြီးလိုအပ်မှုကိုလျှော့တွက်နိုင်သည့်အလားအလာရှိသောသူများကကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ပတ်တိုင်စကားပြောခဲ့သည် ။
အလားအလာကငါ့အမှားပဲ။ ငါကုမ္ပဏီကိုတင်းကျပ်စွာခြေရာခံသင့်တယ်။ စာဖတ်သူများသော်လည်းအခြားဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြသည်။ မိန်းမကပြောတယ်၊
အင်တာနက်ကလူတွေရောဘာတွေပါလဲ။ မင်းဖုန်းကိုမဖြေဘူး၊ အီးမေးလ်မဖြေဘူး၊ မတုံ့ပြန်ဘူး။
ငါတောင်းပန်ခဲ့ပါဘူး အဲဒီအစားငါသူမကိုအမှန်တရားပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်တစ်လလျှင်အနည်းဆုံး ,20,000 ည့်သည် ၂၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်၊ မှတ်ချက် ၂၅၀ (အများစုမှာစပမ်များဖြစ်သည်) နှင့်တောင်းဆိုမှု ၁၀၀ ကျော်။ သို့သော်တောင်းဆိုမှုများသည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုများမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကအပိုဆောင်းအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေနေစာဖတ်သူများပါပဲ ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်များမှတဆင့်ဤအကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ငါအမြဲမတုံ့ပြန်ဘူး တကယ်တော့ငါပုံမှန်အားဖြင့်တုံ့ပြန်ကြဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်ကိုရေးပြီးထိပ်တန်း Indiana ပြည်နယ်ဘလော့ဂ်စစ်တမ်း ၅၀ တွင်သူတို့၏ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံပြီးနောက်ယခုခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်ရခဲ့သောအီးမေးလ်မှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ်အတွင်းမှမက်ဆေ့ခ်ျများစွာကိုရေးပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်၏ထင်မြင်ချက်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များတောင်းခံရန်တွစ်တာတွင်မတူညီသော DM များစွာကိုသင့်ထံသို့ပို့ပေးခဲ့ပြီးတစ်ခါမှသင့်ထံမှတုံ့ပြန်မှုမရခဲ့ပါ။ နားလည်သဘောပေါက်မှုအနေဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအသစ်နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုစတင်ခြင်းဖြင့်သင်အလွန်အလုပ်များသောလူဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ ခရစ် Brogan, ဗက်ဟတ်, Erik ကုန်းပတ် စသည်တို့ကိုအစဉ်အမြဲငါ့အဘို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကြပါပြီ) ။
ခရစ်၊ ဗက်နှင့်အဲရီတို့ဤကဲ့သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည်အံ့သြစရာပင်။ ငါ 3AM အထိဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သာပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အီးမေးလ်ကိုတုံ့ပြန်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောတောင်းဆိုမှုများကိုမည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းခရစ်၊ ဗက်နှင့်အဲရစ်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
မနေ့ကငါဒေသဆိုင်ရာညီလာခံမှာခဲ့ပါတယ်3လူတို့သဖြင့်ခြမ်းခဲ့သည် ... တ ဦး တည်းတွဲဖက်ခဲ့တ ဦး တည်းငါ့အရောင်းနည်းပြ, တ ဦး တည်းဖောက်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တွဲဖက်နှင့်အရောင်းနည်းပြကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ဖုန်း၊ အီးမေးလ်များကိုဘယ်တော့မှမဖြေပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်ကိုကြည့်ပြီး“ မင်းရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့အီးမေးလ်တွေကိုငါပြန်ဖြေသလား” ဟုမေးခဲ့သည်။ သူက“ ဟုတ်တယ်၊ အမြဲတမ်း…တစ်ခါတလေညအလယ်မှာ! တစ်နေ့ကို ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
တစ်ခါတလေငါဝဘ်နှင့်ရှေးရှေးကြိုက်တယ်ယုံကြည်ပါတယ် ခရစ်အန်ဒါဆင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်၊ ကျွန်ုပ်ကြွေးရှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနှင့်ရောင်းချသူများသည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ အခမဲ့။ ငါအာရုံစိုက်ရမယ်:
ဝယ်သူများ - ဤသူများသည်ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေသောသူများဖြစ်သည်။
အလားအလာ - ဤကုမ္ပဏီများသည်ဘတ်ဂျက်ရှိသောသုံးစွဲသူများဖြစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ပါးစပ်အလားအလာ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို - ဤကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်မှကျွန်ုပ်ထံလွှဲပြောင်းပေးသောကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖောက်သည်များဖြစ်လာရန်နှင့်ကုမ္ပဏီတွင်ငွေရေးကြေးရေးအရအဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းသိသောကျွန်ုပ်ဖောက်သည်များဖြစ်သည်။
အခြားတောင်းဆိုမှုများ - ဤအရာများသည်အီးမေးလ်များ၊ ပုံစံတောင်းဆိုမှုများ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၊ ၂ နှင့် ၃ တွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်စာရင်းမှပြုတ်ကျသည်။
ငါချဉ်းကပ်မှုကြောင့်ငါအခွင့်အလမ်းများကိုပျောက်ဆုံးနေပါသလား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် - ဒါကြောင့်ငါလာပြီပေါ့ အရောင်းနည်းပြဒီမှာ Indianapolis။ မပြောတတ်ဘူး။ ငါသိသည်မှာ“ အခြားတောင်းဆိုမှုများ” သည်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်လအနည်းငယ်ကြာရန်အချိန်ယူနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လပေါင်းများစွာမတတ်နိုင်ပါ။
စာရှုသူများသည်ဖောက်သည်များမဟုတ်ပါ။ စာရင်းသွင်းသူသည်ဖောက်သည်များပင်မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်သူများနှင့် ၀ ယ်ယူသူများသည်သူတို့၏ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့်ဤဘလော့ဂ်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးဆောင်ခြင်းမပြုပေ။ စာဖတ်သူများနှင့်စာရင်းသွင်းသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်သဘောတူညီချက်မရှိပါ။
ဒီဘလော့ဟာအမြတ်အစွန်းရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာသန်းကြွယ်သူဌေးမဟုတ်ပါ။ ငါကအမြတ်အစွန်းရဖို့သော်လည်း, ငါကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကျသင့်ငွေအားလုံးကိုပေးချေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများနှင့်စာရင်းပေးသွင်းသူများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြေကြားခြင်းဖြင့်တစ်ပတ်ပတ်လုံးထိုင်။ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်အထိ ... ကျွန်ုပ်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုသွားရန်လိုအပ်သည် ဖောက်သည်များ.
သင်ဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လိုပါကသင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ညမှာတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရယ်မောခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ဘတ်ဂျက်ရှိရင် ၁ ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကြောင့်…အကယ်လို့သင်ဟာစာဖတ်သူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်စာရင်းသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအခမဲ့အကြံဥာဏ်အချို့ရှာနေတယ်ဆိုရင်ငါမတုံ့ပြန်တဲ့အခါစိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ငါငွေတောင်းခံလွှာကိုဆပ်ဖို့ကြိုးစားနေအလုပ်များနေပါတယ်!
Nick Bostic ဖြစ်သည်
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 41
အကောင်းဆုံးအချက်ပဲ။ ငါတိုတိုဖြစ်ခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်။ မနေ့ကလုပ်ဖော်တစ် ဦး နှင့်အတူအလားတူဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့သည်သူမပဲရသေးသည်နှင့်ငါသူမ၏မြန်မြန်စာစာပြန်ပို့မပေးကြောင်းတိုင်ကြားခဲ့သည်။ ငါသူမ၏အီးမေးလ်များကိုငါဘယ်လောက်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်သူမ၏မေးသော်သူမကလျင်မြန်စွာဝန်ခံခဲ့သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်နှစ်ခု၏ရောနှော ဦး စားပေးရမယ်။ ယခုဤမှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မတုံ့ပြန်ပါကကျွန်ုပ်လုံးဝနားလည်မည်။
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 15
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘလော့ဂ်အတွက်စီမံခန့်ခွဲသူနှင့်ဤတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်။ this ဤအထောက်အပံ့ကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပါ။
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 17
နစ်ခ်ကဲ့သို့သောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောမှတ်ချက်ကိုမည်သို့တုံ့ပြန်နိုင်မည်နည်း။ သင်မှန်ပါသည်၊ အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းမှာတစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးတွေနဲ့ဖုန်းတွေမှာတစ်နေကုန်ကစားရတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကပေးဆပ်စရာမရှိပါဘူး။ တစ်နေ့လုံးအီးမေးလ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအချိန်များစွာချွေတာရာတွင်အလွန်ထိရောက်ပါသည်။
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 52
ငါဒီ blog ကို 'freebie' လို့ငါတို့ထင်တယ်၊ ငါတို့ဘလော့ဂါတွေရဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုစီ၏ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များသည်ရုပ်ပုံတစ်ခုလုံးကိုမဖော်ပြပါက - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများနှင့်နောက်အဆင့်သို့တက်ရန်ကြိုးစားချင်ပါသည်။
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 53
သင်၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့် Doug၊ သင်သည်ဖောက်သည်များအားအချိန်မီဂရုစိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်သက်သေပြနိုင်သည်။ လူတော်တော်များများကမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို (တန်ဖိုးထားသင့်တယ်) တန်ဖိုးထားတာကအရမ်းကိုအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့တန်ဖိုးရှိသောဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုမင်းပြန်ပေးရမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေသောအခါကျွန်ုပ်သည်ချက်ချင်းဂရုစိုက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ သငျသညျမပို့ရန်ဘယ်တော့မှမနှင့်ငါဆက်ပြောသည်အဘယ်ကြောင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သင်၏ ဦး စားပေးသည်အစက်အပြောက်များဖြစ်သည်။
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 19
ငါ့ကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ငှားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လူတို့အားအဖြေပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင့်အား ၀ င်ငွေများမည်သည့်အခါမျှမရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မှာ🙂မီဒီယာ / စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း / ကြော်ငြာခြင်းအသစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူအခမဲ့အကြံဥာဏ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ငါသို့သော်ဤပြောပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက်တခုခု (သို့) အီးမေးလ်ကိုအခြေခံပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှု (သို့) ဗဟုသုတမျိုးစုံရရှိရင်မင်းအဲဒီလူကိုသင်တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းအရင်ကငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့မှတ်ချက်အချို့ကိုမင်းတုန့်ပြန်လိုက်ပြီဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်မင်းနားထောင်ပေးတာငါသိတယ် ပတ်ပတ်လည်ဂရိတ်အချက်များ။
22:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 22
Doug ငါဒီအလတ်စားအတွက်ပြုမိအလုံအလောက် freebies သင့်ရဲ့ gripe နားလည်ရန်ဤမျှလောက်ဤနေရာတွင်တန်ပြန်နားလည်သဘောပေါက်ရန်။ ငါငွေတောင်းခံလွှာပေးဆောင်မှုအတွက်သင့်အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကသင့်ကိုအပြစ်တင်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းတို့သည် U2 ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲသူတို့၏သီချင်းများကိုကုမ္ပဏီများအားရောင်းချခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများသို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
25:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 39
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘို! သင်ကစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ပါ။ ငါသည်ဤကဲ့သို့သောမြည်သောအခါသင်အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်ရန်အချိန်ယူဆိုတဲ့အချက်ကိုချစ်ကြတယ်။
25:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 43
ဒီတော့ငါနောက်ဆုံး4နှစ်အခမဲ့အခမဲ့ထောက်ပံ့သောဤဘလော့ဂ်၏စာဖတ်သူများမှတစ်နည်းနည်းနဲ့ disservice လုပ်နေတာလဲ တကယ်လား
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်အဓိကမီးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်လလျှင် visitors ည့်သည် ၃၀၀၀၀ နှင့်အတူကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မည်သို့စီမံမည်နည်း။ ငါအမှတ်စနစ်ကိုသငျ့သလော နည်းစနစ်ကဘာလဲ? မှော်ကျည်ဆံကဘာလဲ?
26:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 35
27:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 12, 50
မင်းပျောက်နေတာတစ်ခုကမင်းကမင်းကိုလှောင်ပြောင်ဖို့အရမ်းပျော်တာပဲ .. မင်းသူငယ်ချင်းတွေကမင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲပေးရင်မင်းအမြဲတမ်းတောက်လောင်နေမှာပါ။
အလေးအနက်ထား, ထို post ကိုချစ်။ သငျသညျအများအားဖြင့်သိသိသာသာသိမ်မွေ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌အခါ, လူတွေကအခမဲ့အကူအညီတောင်းခံရန်အဆင်ပြေသည်ဟုခံစားရပုံရသည်, သင်များသောအားဖြင့်မျှဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ တော်တော်ရက်ရောကြသည်။ ဒီလှည့်ကွက်ကတော့ဘယ်အချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုတာသင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ ငါ့အတွက်ကြေး ...
22:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 29
ယခုမှာသင်သည် Doug သွားပြီဖြစ်သည်! ခင်ဗျားနောက်ထပ်ကြီးစွာသောပို့စ်တစ်ခုရေးခဲ့တယ်။ မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်အတွက်မင်းကိုငါရိုးရိုးသားသားချီးမွမ်းပါတယ်။ ငါဟာမင်းရဲ့အချိန်တွေကို ၀ င်ငွေမတောင်းဆိုတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်၊ ငါနင့်ကိုချစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းသင်နဲ့အတူရယ်မောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ် (မျှော်လင့်ပါတယ်) မင်းရဲ့အချိန်ကိုသိခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်၊ သင်နဲ့အတူငါပြန်မလာရင်စိတ်မဆိုးဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများကတုန့်ပြန်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့ရသော်ကျွန်ုပ်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတူး။ နံရံကိုဆန့်ကျင်။ အကြိမ်အနည်းငယ်ခုတ်မောင်းခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုခုထွက်ပေါ်လာသည်အထိထိုအရာသည်အလွန်ကောင်းသည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလားတူအချိန်ဇယားများနှင့်တောင်းဆိုမှုများရှိသည်။ ငါတောင်းတဲ့သူတိုင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလက်ချောင်းထိပ်မှာရှိကောင်းရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုက "မဟုတ်ဘူး" ဆိုတဲ့စာလုံးနှစ်လုံးသုံးတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ ။
အရာအားလုံးမှာဟန်ချက်ညီအောင်ရှာပြီး“ အခုငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုအကြံပေးပါရစေ” လို့စပြောတာကိုမျှော်လင့်မိပါတယ်။
22:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 00
“ မျှော်လင့်ပါတယ်” @jasonbean: disqus မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဒေသတွင်း၌တည်ဆောက်ခဲ့သောမိတ်ဖက်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မှီခိုသောတိုးချဲ့ထောက်ခံမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမကြာခဏ 'ပြန်ဆပ်ရန်' မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်အဲဒီမှာရောက်နေတယ်
22:2013 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 16
ထိုအပြန်အလှန်ဆရာ! အပြန်အလှန်အားဖြင့်! St. Arbucks ၌ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်လုပ်အားပေးအစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ရန်မလိုသော်လည်းနှစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ =)